Kupokana kwenguva dzose: Sei kushandiswa kweGNU/Linux kusati kwapararira? | Kubva kuLinux
Kupokana kwenguva dzose: Sei kushandiswa kweGNU/Linux kusati kwapararira?
Linux Tumira Kuisa | | Updated on 12/02/2022 17:59 | Zvimwe, dzakawanda
Svondo rino pa Linux community kwandinogara, taibata neimwe yemibvunzo yakawanda yechivanhu kubva gore rega rega nezveGNU/Linux. Uye izvi zvaive: Sei GNU/Linux isati yakunda akawanda epamba nehofisi makomputa desktops parizvino?
Naizvozvo, mune ino post tichataura muchidimbu zvese izvi pfungwa nenharo, izvo kune vamwe vedu zvichiri kukosha kugadzirisa, kukunda kana kubudirira kuitira kuti chinangwa ichi chizadzikiswe munguva pfupi.
Uye semazuva ese, tisati tapinda zvizere mumusoro wenyaya pane iyi kukakavara kusingaperi kana gakava, pamusoro "sei GNU/Linux haisati yakunda akawanda emba nehofisi makomputa desktops", tichasiira vanofarira kuongorora zvinyorwa zvekare zvine chekuita nemubvunzo uyu, malink anotevera kwavari. Nenzira yekuti vanogona kuzviongorora zviri nyore, kana zvichidikanwa, mushure mekupedza kuverenga bhuku iri:
"Pane zvakawanda zvinyorwa nezve kuenzanisa pakati peakasiyana masisitimu anoshanda, akadai seWindows, macOS, GNU/Linux, pakati pevamwe. Kune zvakare vamwe vazhinji vane zvikonzero zvekushandisa chaiyo sisitimu yekushandisa, asi mune ino chinyorwa tichasuma zvikonzero zvakati nei tisingafaniri kushandisa sisitimu yekushandisa: Microsoft Windows. Izvi zvikonzero zvakagadzirwa zvichitora sereferensi kune imwe UNIX-mhando uye yakavhurika sosi masisitimu anoshanda, seLinux, FreeBSD, pakati pevamwe ”. Zvikonzero zvekusashandisa Microsoft Windows
Windows, GNU / Linux uye zvakavanzika
Vashandisi veLinux desktop vanoramba vachikura, nepo vashandisi veWindows vachidzikira zvishoma nezvishoma
1 Kupokana: GNU/Linux, ichave riini Mambo weDesktop?
1.1 Zvazvino uno zvakakurukurwa mumakakatanwa acho
1.1.1 Kuenderana neazvino Hardware
1.1.2 Yepamusoro nhanho uye mhando mapurogiramu ekushanda, kudzidza uye kutamba
1.1.3 Yemahara uye yakavhurika ecosystem, asi ine pundutso uye yakagadzikana mune zvehupfumi
1.1.4 Zvirinani mushandisi ruzivo
1.1.5 best marketing campaign
1.1.6 Default pre-installation pamakombuta
1.1.7 Kutamira kune mobile, iyo Internet yezvinhu uye mamwe matekinoroji
1.1.8 Zvikanganiso nevechitatu mapato vachifarira Linux
1.1.9 Mashoma Distros, Mamwe Mapurogiramu
1.1.10 Nharaunda dzinobudirira uye dzine chepfu shoma
1.1.11 Kudzidziswa kubva paudiki nebazi redzidzo
Kupokana: GNU/Linux, ichave riini Mambo weDesktop?
Zvazvino uno zvakakurukurwa mumakakatanwa acho
Mune zvinotevera tichataura muchidimbu Top 10 yemapoints pane in Nharaunda yevashandisi vemahara uye akavhurika matekinoroji, tinofunga kuti nhasi varipo chikamu chedambudziko uye mhinduro kuzadzisa chinangwa ichi:
Kuenderana neazvino Hardware
Panguva ino, kufambira mberi kwakawanda kunofanirwa kuitwa mukuvandudza nekuvandudzwa kwevatyairi uye firmware yakagadzirwa zvakasununguka uye pachena neNharaunda. Asi pamusoro pezvose, mune vatyairi uye firmware inogadzirwa nemudziyo uye vagadziri vemidziyo, zvakasununguka uye pachena.
Yepamusoro nhanho uye mhando mapurogiramu ekushanda, kudzidza uye kutamba
Kufambira mberi kwakawanda kwakaitwa pachinhu ichi mumakore gumi apfuura, asi kuchine nzira refu yekuenda uye zvinhu zvakawanda zvekuwana. Kunyanya, semuenzaniso, iwo makuru evaridzi software makambani anogadzira akaenzana uye emunharaunda mhinduro dzeGNU/Linux.
Yemahara uye yakavhurika ecosystem, asi ine pundutso uye yakagadzikana mune zvehupfumi
Pano zvinofungidzirwa kuti zvakawanda zvichiri kuda kuitwa, sezvo zuva rega rega kune vashandisi vakawanda, vanogadzira, vazhinji nharaunda, mamwe maapplication uye masisitimu, asi mwero wemipiro kana kudyara kwehupfumi hwevashandisi uye nharaunda kune vanogadzira vakazvimiririra kana mukati. zvikwata, zvichiri zvishoma.
Zvirinani mushandisi ruzivo
Panguva ino zvakawanda zvakaitwa, uye munhu anogona kunge akati zvapfuura. Mazhinji anoyevedza uye anoshanda magadzirirwo akawanikwa muDistributions, ese muDesktop Mamiriro, seMahwindo Mamaneja, pamwe nemashandisirwo ezvakajairwa uye kazhinji kushandiswa. Yakawana kugadzikana kwakawanda uye kushandiswa, uye mukunaka kweGUIs.
Panguva ino zvakawanda zvichiri kuda kuitwa, sezvo kushambadza kwakawanda uye kuri nani kuri kudiwa paInternet neNharaunda yese kutengesa hunhu, mabhenefiti uye zvakanakira zveMahara Software, Open Source uye GNU/Linux.
Default pre-installation pamakombuta
Kufambira mberi kuduku kwakaitwa pano, asi zvirongwa zvakawanda uye zvinofadza zviri kubuda munyaya iyi, nemakambani maduku neanotengesa, pamwe chete nemamwe makambani makuru nevagadziri.
Kutamira kune mobile, iyo Internet yezvinhu uye mamwe matekinoroji
Iyi poindi inoonekwa seyakanakira, mupfungwa yekuti Linux inogadziridzwa zviri nani kune gore, kugadzikana kwakanyanya uye kushandiswa mumidziyo midiki, uye kugadzirisa zvirinani kune mamwe kana ari kubuda matekinoroji sekushandisa machipisi eARM.
Zvikanganiso nevechitatu mapato vachifarira Linux
Vese Microsoft paWindows uye Apple paMacOS vanogona kuramba vachikanganisa muzvigadzirwa zvavo kana nzira dzekuvashambadza. Ndiko, kana izvi zvikanganiso zvekugadzira uye zvisingakwanisi kugadziriswa; kukundikana kwakakomba uye kazhinji, kusasimba uye kushungurudzwa kwetelemetry; mari uye nzira dzekupa marezinesi; uye yakakwirira hardware zvinodiwa kuti ushande; zvese izvi zvinogona kuenderera zvishoma nezvishoma zvichifarira vashandisi vakawanda vanotama kuenda kumahara nekuvhura, seGNU/Linux.
Mashoma Distros, Mamwe Mapurogiramu
Panguva ino, vazhinji vanofunga kuti akasiyana makuru ekugovera, Desktop Mamiriro, Window Mamaneja akakunda pamusoro pekupihwa kweakawanda uye ari nani anobatsira uye anodiwa maapplication.
Nharaunda dzinobudirira uye dzine chepfu shoma
Mune ino penultimate poindi, inofungidzirwa kuti iyo Linux Communities inofanirwa kutarisa zvakanyanya pakugadzirisa matambudziko, kusevha system system, uye yechitatu-bato kudzidziswa, pane nyaya dzisina basa senge kuratidza graphical interface magadzirirwo uye kurwa nevashandisi vevaridzi veOperating Systems, yakavharwa uye. commercial.
Kudzidziswa kubva paudiki nebazi redzidzo
Mune ino penultimate point, kubudirira kwakasiyana kunotariswa, zvichienderana nenyika zhinji nematunhu. Sezvo, semuenzaniso, mune dzimwe nyika kana makondinendi kupfuura mune dzimwe, dhigirii rerutsigiro kubva kumasangano edzidzo yeruzhinji uye mamwe masangano ehurumende akasiyana zvakanyanya.
Semuenzaniso, muEurope matunhu mashoma edzimwe nyika anoita zvirongwa nenzira iyi. Kunyange zvakadaro, Spain inowanzova piyona mune izvi. Nepo, muLatin America, nyika dzese (seCuba, Venezuela neArgentina) dzinowanzoita zvirongwa izvi zvishoma. Kuzadzisa izvi, kupa makomputa ane GNU/Linux akaisirwa vadzidzi vemamwe nhanho/matanho uye kukurudzira kutama kubva kune proprietary software kuenda kune yemahara uye yakavhurika software, mune inobvira basa mapuratifomu evashandi vavo.
Yemahara Software maringe neyakazvimiririra Software: Pros uye Cons yesarudzo yako
Muchidimbu, hwaro hwegakava iri risingaperi Chokwadi zvichagara kwemamwe makore mashoma. Mune mamwe mazwi, panogona kunge paine nzira refu yekuenda pamberi pevaviri GNU / Linux kunyanya, zvakadai se Yemahara Software uye Yakavhurwa Sosi kazhinji kusvika a pfungwa yekuti hapana kudzoka. Zvese zviri zviviri maererano nekukosha kwayo, kukosha uye dhigirii rekushandisa, pamwe nenhamba yevashandisi, kumba uye mumahofisi. Kuita kuti zviitike kuva zvisingarambiki Mambo weDesks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Kupokana kwenguva dzose: Sei kushandiswa kweGNU/Linux kusati kwapararira?
Haisi chinhu pane zvaunotaura pano, ini ndinongoona poindi yezvaunotaura, kushambadza, iyo hardware, murume kana paine rutsigiro rwakawanda zvakanyanya, asi zvachinja zvakanyanya zvichienzaniswa nemakore apfuura, ikozvino zvese zvese. inotsigirwa, pane zvakawanda zvishoma zvehardware nyaya. Iyo nyaya ndeye imwe uye haisi imwe kunze kwekuti kune zvinhu zvakasimbiswa munyika ino uye hapana anozvifambisa. Mienzaniso: ichabuda here sisitimu yekushandisa iyo inosunungura Android? Kwete kuita ruzha, kwete zvisingagoneki, asi zvakanyanya kuoma. Pachabuda app isingaite WhatsApp here? Pachave nebrowser kana injini yekutsvaga inosunungura Chrome uye injini yekutsvaga yeGoogle? Aiwa, app ichabuda here inosunungura Google maps?Kwete kana jee nezvimwe zvakadaro. Hapana achazombosunungura Windows, sei?Zvakanaka, nokuti yakasimbiswa, Mac OS haina kukwanisa kushanda neWindows, iyo yakatova nemakombiyuta ayo kwemakore akawanda, zvakanaka, zvishoma zvishoma Linux ichakwanisa. Kunyangwe zvichindiitira zvakanaka sezvazviri. Chero zvavanotaura Linux iri kufambira mberi nekusvetuka-svetuka uye kwandiri ndizvo zvakakosha. Ndanga ndichishandisa Linux chete pamakomputa angu kwemakore, zvachose kune zvese, basa, kudzidza, kuzorora, kunyange kutamba katatu aaa mitambo nevamwe vazhinji. Iyi ndiyo chete poindi chaiyo painodonha, umo mitambo yeLinux inoburitswa gare gare kupfuura yeWindows, saka kana iwe uri inveterate gamer anogara achida kutamba ichangoburwa, saka hapana. Asi Linux nhasi matambudziko ari kuita nil, ini ndagara ndichishandisa nvidia uye handina kumbobvira ndave nemutyairi mumwechete kana dambudziko rekutsigira. Ndanga ndichiyedza debian nenvidia paPC yangu kwemakore mana nezvinetso zero uye palaptop ine xubuntu ine zero matambudziko zvakare, unogona kuve nePC ine Windows 4 makore ane zero matambudziko, uchiita zvese nayo? iwe uchafanirwa kuifomatidza, nekuti inononoka, nekuda kwechiuru chevhairasi, nezvimwe. Linux yakakwana, ndanga ndichiita kwemakore, sezvandakaita neWindows, asi pasina dambudziko rimwe chete, saka handidi kuti rive gore reLinux desktop zvachose, ndinoda kuti ienderere mberi se iri kufambira mberi nekufambira mberi, hapana Chii icho Linux yanhasi ine chekuita neiyo yemakore gumi apfuura, igomba rakadzika-dzika uye kana tikadzokera shure makore makumi maviri kana kupfuura ini handitombokuudza. Uye Windows mairi yachinja kubva kuxp kuenda ku4 kuenda ku10, nezvimwewo?, hapana kana chinhu, ndizvozvo.
Pindura kune Yakagadzirwa
Kwaziwai, Yakasimbiswa. Ndatenda nekutaura kwako uye mupiro wakanakisa urimo, uchibva pane chako chiitiko neGNU/Linux uye IT munda, zvakazara.
Ini ndinoshandisa linux, iwe unoshandisa linux, asi rusununguko rwekuda ruripo, kana sekutaura kunoita morpheus muMatrix ivo vanonyanya kutsamira pakushandisa windowssky zvekuti vanozoidzivirira kusvika parufu, mumwe munhu akandiudza kuti aive nepfungwa yekuita chirongwa. mumwe munhu waaizivana naye akati zviite palinux uye kushandisa software yemahara, vanhu vaviri ava vakakakavadzana uye purojekiti haina kupera.
Ndakabvunza munhu wepurojekiti kuti nei asingadi kushandisa software yemahara uye akati «iyo yakanga isingachashandi» , uye ipapo ndakarangarira mazwi iwayo akati «apo destiny inotumira, kwete kunyange vakashinga vanoichinja! , kana wakaberekwa uri nyundo inobva kudenga, mbambo dzichakuwira”
Kwaziwai Violet. Ndatenda nemhinduro yako. Zvirokwazvo, chikamu cherusununguko (rwemahara) uye kuvhurika (kuvhurika) kwehuzivi hweNharaunda yedu, ibasa rekunzwisisa uye kubvuma kuti havasi vese vanoda kana vanogona kubatana nesu, panguva kana nguva dzatinoda, kana chero zvikonzero.Ngatizvifumure.
Muchiitiko changu chega, ndine kombiyuta yangu neLinux neWindows kwemakore akawanda, ndinoshandisa Linux kune zvose, kunze kwekutamba mitambo, yandisina imwe sarudzo kunze kwekushandisa mahwindo.
Kune mitambo isingagone kuiswa kana kusashanda, senge Fortnite kubva kuEpicGames, uye mamwe anobva kuSteam asingashande kana, ndinofunga nekuda kwezvirongwa zveanticheat zvavanoda.
Kwaziwai Zakar. Tinokutendai nemhinduro yenyu uye tipeiwo ruzivo rwenyu maererano nenyaya yacho.
Official rutsigiro nyaya. Nharaunda inotsigira... Izvo hazvina kukosha vanhu vazhinji, nyanzvi kana makambani. Vanoda kambani kwavanogona kuzivisa kana matambudziko avo asina kugadziriswa kana kusasangana nemaSLA echibvumirano.
Zvakare kunyangwe nerutsigiro rwenharaunda, chinhu chekutanga kutaura ndechekuti ini ndinoshandisa ichi kana icho kugovera…. Izvo zvinoshanda kune debian hazvishande kune ubuntu, nezvimwewo. Saka Linux yakadaro haipo padanho rekutsigira.
One-stop configuration window:
Icho chokwadi chekuti kune gazillion kugovera infumable kana zvasvika pakupa rutsigiro, ingave bhizinesi kana nharaunda.
Asi zvakare kana kugovera kwega kwega kuchiisa zvinhu (zita / nzira yemafaira ekugadzirisa, maturusi ekugadzirisa, nezvimwewo ...) kwavanoda kupenga.
Linux standard base ndinoedza asi inoita kunge inopinda nepadenga.
Chimwe chezvinhu zvishoma izvo mahwindo ane zvakanaka ndiyo control panel, uye iye zvino vanoda kuiisa nemahwindo 11. Nzvimbo imwe chete yekuisa pakati pekugadzirisa hurongwa. Iyo windows registry yakanaka yekuve nechepakati, kunyangwe kukanganisa mune zvese zvimwe.
Nzvimbo imwe chete yekuenda kana chimwe chinhu chisingashande kana kusashanda sezvachinofanirwa. Uye kwaunokwanisa kuwana matanda nekudzvanya kuti uone zvaitika.(Bvumira kupinda kubva kuUI asi chengeta koni).
Zvakaoma sei kuve necentralized application yeiyo system?
Zvakaoma sei kune maapplication anobata zvakakosha zviwanikwa kana masevhisi maseva kana chero kuwedzera / kubvisa yavo yekumisikidza module paunenge uchiisa / uninstall?
Kwaziwai, Michael. Ndatenda nemhinduro yako uye tipe maonero ako akakosha panhau yakasimudzwa.
Hurumende yakavhara netbooks nelinux, asi ndinofunga munhu wese anoziva Linux, asi zvinosuruvarisa kuti vashoma vanoishandisa.
Chinhu chakaipa ndechokuti vanhu vanoshandisa chimwe chinhu nokuda kwekusununguka, vasingazivi kuti raibhurari inorema 3 MB inoshanda sei, kana vachigona kuita chinhu chimwe chete nemurairo we20-byte.
Kwaziwai, ArtEze. Ndatenda nemhinduro yako. Ehe, mamwe maPC eHurumende ane Linux anowanzo Kukiiwa kuburikidza neBIOS.
Ndiri kuona kuti dambudziko rakakura neGNU/Linux nderekuumbwa kwemimhanzi
Kana paine kugoverwa seUbuntu Studio/Av Linux nezvimwewo asi dambudziko rinoramba rakafanana kana kuti matambudziko
1.Jackd uye Pulse vaviri ava vanorwa sekitsi nembwa, havagone kutora zvakanakisa zvepasirese (zvichida mumigove yakatsaurirwa kwairi) uye kuvabatanidza mune imwechete yekuteerera server uye kuti mune zvigadziriso unogona kuzviita. shandai pamwe chete kana makaparadzana (zvichienderana nekuti muri kuzonyora here kana kuti kwete)
2-Kusangana kwezvimwe zvirongwa zvakaita seRosegarden zvinopa GRIMA, zvimwe zvinoonekwa zvakanaka asi zvinoshaya zvinhu zvakaita seMuse Score/Note edit style sheet music viewer yakabatanidzwa mairi (Qtractor/LMMS etc) uye tisingarevi kuti vanoshaya mapakeji ezviridzwa izvo. inonzwika zvine mwero zvakanaka kune izvi zvirongwa uye dzokorora neMIDI
Iwo mapoinzi maviri arikushaikwa kubva kuGNU/Linux zvirinani, uye tisingarevi kushomeka kweiyo theme kusikwa kwekubatanidza kuOpenShot sekunge ine Imovie, dai ichi chiri chokwadi chingave chikuru OS kwandiri.
Kwaziwai, Dwmaquero. Ndatenda nekutaura kwako uye nekunakisa kupinza kubva pane chako chiitiko semushandisi weGNU/Linux.
Kutenga kwaNvidia kweARM kwakadzimwa
KDE Plasma 5.24 inosvika nekuvandudzwa kwakasiyana, kugadzirisa uye nezvimwe